Dhul badhe - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Dhul badhe)
Isuduwe: 0°0′0″N 77°59′31″W﻿ / ﻿0.00000°N 77.99194°W﻿ / 0.00000; -77.99194﻿ (highest point on the Equator)
Wadanada uu dhexmaro xariiqda Dhulbadhaha (casaan) iyo wadanada uu dhex maro xariiqda Meridian (buluug)
Dhulbadhe, Dhulbare (Af-Ingiriis: equator; Af-Carabi: خط الاستواء) waa xariiq toosan oo ku soo wareegta goobada meere taasi oo u kala qeybisa labo gobol.
Sida caadiga ah, Dhulbadhe waa xariiq khiyaali ah oo dhulka u qeybisa Cidhifka Waqooyi iyo Cidhifka Koonfur. Sidoo kale, xariiqda dhulbadhuhu waxay leedahay dherer dhan 40,075 km; taasi 78.7% ka mid ah dhex marto biyaha badaha iyo 21.3% oo dhul dhex marta.
Guud ahaan, dhamaan meerayaasha koonka waxay dhamaantood leeyihiin xariiq dhulbadhe.
Dhulbadhe waa xariiq dhexmarta meere kasta taasi oo u qeybisa labo gobol; koonfur iyo waqooyi. Dhulbadha, sidoo kale loo yaqaano Xariiqda Dhexe waxay meeraha dhulka ka dhex martaa qaarada Afrika, Badhtamaha Ameerika, iyo qeybo ka mid ah Aasiya.
↑ Other planets and astronomical bodies have equators similarly defined.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhulbare&oldid=187489"